DIY pendi shaker kana yekamba pendi shaker • Modelarski Świat
DIY pendi shaker
Model nyika DIY: DIY Muenzaniso Kugadzira 2018-06-15 | 3
Tinokukoka iwe kune yekutanga yekupinda muchikamu chitsva - DIY: Zviite Iwe pachako Modeling. Muchikamu chino, tinopa zvigadzirwa zvakagadzirwa pamba uye zvishandiso zvinobatsira kune vanoteedzera uye vanofarira DIY.
Chekutanga pane zvese - Paint Shaker kana "shaker (zvakakomba?) Yemapendi". Ona kuti sei, uchishandisa chakakurumbira chishandiso - jigsaw, zunza uye sanganisa yako yemhando pendi nemakemikari. Ini ndinoti ipapo - iyi haisi mhinduro yezuva nezuva. Zvisinei, zvakakosha kuva nesarudzo yekusanganisa mapende zvakanaka, kana iwe usiri kuda kuzviita neruoko uye pendi haina kushandiswa kwenguva yakareba. Kunze kwezvo, isu hatidi kuchenesa chero maturusi nekuti tinosanganisa (zunza) mudziyo wakavharwa. Chimwe chinhu icho vazhinji vavo vangangove vakaona paYouTube, asi zvirokwazvo vamwe vasati.
"Shaker" inogadzirwa pamba yependi inoshandisa jigsaw haisi chishandiso chehunyanzvi, asi imba yeDIY - sekuda kuziva. Iyo inoshandiswa pakubatanidza kusanganisa kwemapendi ekuvaraidza, apo isu tine akawanda awo ekushandisa kana kana ivo vakanyanya kushatiswa. Izvo zvinogona kuitwa uchishandisa nzira dzakasiyana, ini ndinopa inokurumidza uye isinganetsi nzira.
Shamba usati washandisa kwemaminitsi maviri
Ichi chinyorwa chinhu chisinga paradzanisike cheanenge ese mavara ane pendi uye akafanana makemikari. Izvi zvine chekuita nehunhu hwependi hwatinozoshandisa kumamodeli edu. Mushure menguva pfupi yekukwegura kwepende, iyo pigment inowanzogara pasi pechinhu chemudziyo, uye kana ikasiiwa munzvimbo iyi kwenguva yakareba, inopindana kuita gobvu gobvu. Kukuchidzira ruoko nema spatula kunonetesa uye kunoshatisa, uye vanokamhidzira vakagadzirwa nemukaka wakakurumbira mafrothers anopararira munzvimbo yese. Saka inguva yekuburitsa pfuti dzinorema uye kuti basa riitwe nekukurumidza uye nenzira kwayo.
Ndokumbira kuti uone mirairo yevhidhiyo maitiro ekugadzira imba "pendi shaker":
Pashure: Previous romukova: Kugadzira base yedhaorama - zvekuita nazvo? 1 yakapusa patent.
Zvadaro: Chinotevera chinotevera: Ongororo: "Ino inyika yangu" kubva kuWorld of Fantasy akateedzana ari kubhururuka kuenda kumusangano - seti yezviverengero muchiyero cha1: ​​24 kubva Master Master
Chiremba Gusto Iye anonyora, kuti:
Pakupedzisira, ini ndakawana webhusaiti nezve modelling yevatangi iyo yainge yakandinakira.
Unbekannte number Iye anonyora, kuti:
Ini ndinotanga kugadzira michina yakadaro! Kwaziso
Modelling Iye anonyora, kuti:
Munguva pfupi iwedzere kuzviitira made!